Kulungile uMama ngu-Elvis Presley - Izinto Zobugcisa
Kulungile uMama ngu-Elvis Presley
Yayingu-Elvis wokuqala ongatshatanga, kwaye yaphuma kwiseshoni yakhe yokuqala yokurekhoda. U-Elvis wayengumqhubi weloli oneminyaka eli-19 ubudala xa wayefika kwi-Sun Records eMemphis ukurekhoda ingoma njengesipho sikanina. Ilanga lalilelika Sam Sam Phillips, owayesazi ukuba umncedisi wakhe, uMarion Keizer, wayejonge 'umntu omhlophe ovakala njengomntu omnyama.' Wazisa umphathi wakhe ku-Elvis, kwaye uPhillips walungiselela iiseshoni ezithile kunye nabanye abadlali beseshoni yalapha: uBassist uBill Black kunye no-Scotty Moore.
Abathathu bazame iingoma ezahlukeneyo ngeendlela ezahlukeneyo, ekugqibeleni babetha amanqaku xa baqala ngokungaqhelekanga ukudlala u-Arthur 'Big Boy' uCrudup engacacanga ingoma ye-blues ka-1946 ethi 'Kulungile,' ngendlela ekhawulezayo nenobuchule. UPhillips wakuthanda oko wakuvayo kwaye wabayalela ukuba barekhode ingoma ngale ndlela. Oku kwahluka kwe-uptempo blues kukhokelele abanye ababhali bembali yomculo ukuba bayithathe njengengoma yokuqala yedwala.
U-Elvis urekhode le ngoma kwizitudiyo zika-Sam Phillips eMemphis ngoJulayi 5, 1954. USam wahambisa ikopi kwidiski yasekuhlaleni uJockey uDewey Phillips (akukho buhlobo) kwi-WHBQ. NgoJulayi 8, uDewey waba ngu-DJ wokuqala ukudlala ingoma ka-Elvis xa wayinika yena Bomvu, kushushu & Luhlaza umboniso. Inempendulo enkulu, ke yayidlala kaninzi kwaye ekugqibeleni yazisa uElvis kudliwanondlebe.
UDewey Phillips wayenguDJ owayenguvulindlela owayedlala umxube womculo omnyama nomhlophe notsale umdla wabalandeli abakhulu nabahlukeneyo. Emva kokuba aqale ukudlala 'Kulungile Mama,' yabanjwa ngokukhawuleza eMemphis yaya kwilizwe lonke, ibeka inqanaba lokunyuka ngokukhawuleza kuka-Elvis.
Uxelele uPresley Amatye agiqekayo ndathi ukuba ndingaze ndifike kwindawo endinokuziva ngayo yonke into endala ka-Arthur, bendiya kuba yindoda yomculo engazange ibonwe mntu.
Le ngoma yayilixesha lesibini kuphela u-Elvis kunye no-Scotty Moore owayedlala phambili edlala kunye. Yayiyingoma yokuqala kaElvis edlalwa kwikonsathi: NgoJulayi 30, 1954, uElvis wavula uSlim Whitman eMemphis kwaye wenza ingoma ethi 'Kulungile, Mama,' 'iBlue Moon yaseKentucky,' kwaye 'Andisokuze Ndiye (UDarlin omncinci ').'
Ngokuka-Scotty Moore, le seshini ibingagudisi kangako. Uthi u-Elvis waqala ukutsiba-jika, 'esenza isidenge,' etsala umsindo kaSam Phillips, owayengumnini welebheli kunye nesitudiyo sokurekhoda. UPhillips ubenze baqala phantsi, kwaye yayikukuthatha oku kwesibini ukuba ngumgcini.
NgoJulayi 5, 2004, kanye kwiminyaka engama-50 emva kokuba u-Elvis arekhode ingoma, 'Kulungile Mama' wakhululwa kwakhona. Khange ifumane ngqwalasela eMelika kodwa yenze # 3 e-UK yaze yatshatiswa eCanada nase-Australia.
Ingelosi inombolo ye-111 enentsingiselo
Yithiye kuphela indlela xa ulahlekile ekhaya
Indlela yobomi yenombolo 2
yiza kwiimbaleki zase-eileen dexy ezinzulwini zobusuku
ndiyathemba ukuba unexesha lobomi bakho lyrics
ukubona inani lama-33 ngokuphindaphindiweyo
umsi emanzini amanzi intsingiselo